Saturday October 17, 2020 - 08:26:23 in Articles by Hadhwanaag News
Waa mar kale iyo maqaaladeenii taxanaha ahaa oo aynu maanta ku faaqidi doono xanuunka gaastariga. Cudurkan ayaa ah mid haleela qaybo ka mid ah dheef-shiidka inta badana abbaara caloosha. Ereyga gaastari ayaa isagu ah mid aynu qalad fahanay islamarkaana aan ahayn sida aynu u naqaano ama u adeegsano. Ereygan ayaa isagu asal ahaan ka soo jeeda afka laatiin-ka oo inaga afkeena u dhigmaya caloosha. Ereygani ma sheegayo cillad ku timaada caloosha bini’aadmiga ee keliya waa magaca xubintani leedahay.